နေပြည်တော်တွင် ၁၅ သိန်းတန် GSM ဖုန်းကို ၅ သိန်းဖြင့် ရောင်းမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » နေပြည်တော်တွင် ၁၅ သိန်းတန် GSM ဖုန်းကို ၅ သိန်းဖြင့် ရောင်းမည်
Posted by toyo on Dec 7, 2010 in News | 10 comments
တနိုင်ငံလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်ရှိ ငွေကျပ် ၁၅ သိန်း ပေးသွင်းရသော GSM မိုဘိုင်းဖုန်းများကို နေပြည်တော် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ငွေကျပ် ၅ သိန်းဖြင့် ယခုလမှ စတင် ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ဂယ်ဆိုလဲ ကိုင်နိုင်သေးပါဝူးလို့ 
တိုယို .. မိုက်တယ်နော် .. ခုဂဏန်းကအစ သိနေတာ ..
အရင်တုန်းက .. ဂျီနဲ့ဆို ဗုံးခွဲလို့ရတယ် ဆိုပြီး နေပူတော်မှာ ဂျီ မရဘူး ..
ဟော .. ပေါက်ဖော်ကြီးက ငါတို့ နေပူတော်ကိုလာတဲ့အခါ ဘယ်လို လုပ်ပေးမှာလဲလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့
ဂျီတွေ ဆက်လို့ ရစေ ဆိုပြီး ဖြစ်လာရော .. (ယာယီလို့ပဲ သိထားခဲ့တာ ..) တိုယိုက ဒါ အစဉ် ဖြစ်မယ် ဆိုတော့ ရန်ကုန်က ဂျီတွေ နေပူတော်မှာ သီးခြား ဖုံး မလိုတော့ဘူးပေါ့ .. အမှန် ဆိုရင် တိုယိုကို ကျေးဇူး တင်မယ် .. အင် ဆိုရင် တိုယိုကို မေတ္တာ ကောင်းကောင်း ပို့လိုက်မယ်နော် ..
ဟုတ်တယ်ဆိုရင် ကူးယူရေးသားဖော်ပြတာလို့ ရေးသင့်ပါကြောင်း မှတ်ချက်ပေးလိုပါတယ်။
ဒီသတင်းထွက်လာပြီးနောက် မြန်မာပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငြင်းဆိုထားတာတွေ တွေ့နေရတယ်။ မှန်မမှန်ဆိုတာပါ နောက်ဆက်တွဲ ပြန်လည် ရေးသားပေးရန် တောင်းဆိုပါတယ်။
ပြည်ပ အခြေစိုက်ဆိုက်တစ်ခုမှာလည်း အလားတူသတင်းမျိုးတင်ထားတာတွေ့မိပါရဲ့ ။ ပြောနေတာတော့ကြာပါပြီ …. နောက်တော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ။
လိုချင်တယ် … ၀ယ်ပေး .. ၀ယ်ပေး ..
ဖြစ်သင့်နေတာ ကြာပါပြီဗျာ…. အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြောပြတာ ပြန်ပြောရရင် သူ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ရောက်ခဲ့တုန်းက ဖုန်းတွေ အကြောင်းပြောနေကြရင်းနဲ့ ငါတို့ဆီမှာ SIM Card တစ်ကဒ်ကို $1500 လောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ ဘာပြောတယ်မှတ်သလဲ `မင်းတို့နိုင်ငံက SIM Card က ရွှေနဲ့လုပ်တာလား´ တဲ့ဗျာ…
အရင်က ချပေးထားတဲ့GSM (၁၅)သိန်းခွဲတန်ဖုန်းတွေကို အထူးအခွင့်အရေး အဖြစ် မကောင်းတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းလောက်တော့ ချိတ်ပေးသင့်ပါတယ်နော်..။